Siddha Archives – Page4of9– Samacharpati
पोखरा, १३ असार । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ घारीपाटनस्थित सफल वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मानव सेवा आश्रममा आर्थिक सहयोग गरेको छ । सहकारीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पोखरा १७ छोरेपाटनमा सञ्चालित आश्रमलाई एक छाक खाना बरावर १७ हजार पाँच सय रुपैया नगद सहयोग गरेको हो । आश्रममा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सहकारीका अध्यक्ष […]
पत्रकार महासङ्घ कास्कीद्वारा तीन विधाका पत्रकारिता पुरस्कारबाट तीन पत्रकारलाई सम्मान
पोखरा, १३ असार । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीद्वारा सञ्चालित एवं स्थापित विभिन्न तीन विधाका पत्रकारिता पुरस्कारबाट तीन पत्रकारलाई सम्मान गरिएको छ । पोखरा पत्रकारिता पुरस्कार, २०७५ बाट श्यामनाथ कुँवरलाई सम्मान गरिएको छ । उहाँलाई रु ३५ हजार एक नगदसहित दोसल्ला र सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको हो । त्यसैगरी गजेन्द्र भण्डारी सिर्जनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, २०७५ बाट पत्रकार […]
पोखरा, १३ असार । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवद्र्धन एवं पर्यटन यातायात समिति,पोखराको आयोजनामा पोखरामा पर्यटक बस चलाउँदै आएका चालक एवं सहचालकलाई तालीम दिइएको छ । पर्यटक आउँदा वा जाँदा पहिलो र अन्तिम सम्पर्क व्यक्ति चालक एवं सहचालक हुने भएकाले उनीहरूलाई पर्यटकसँग गरिने व्यवहार, आतिथ्यता, अत्यावश्यकीय प्राविधिक जानकारी लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको हो । कार्यक्रममा नेपाल […]
पोखरा, १३ असार । पोखराको गैह्रापाटनमा रहेको पोखरा थिएटरको गन्र्धव नाटकघरमा शुक्रबारबाट ‘योनिका कथाहरु’ पोखरामा मञ्चन हुँदैछ । कथा घेरा प्रोडक्सनको प्रस्तुतीको नाटक मञ्चनको तयारी पुरा भएको नाटकको निर्देशक आकांक्षा कार्कीले जनाइन् । नाटकको सम्पुर्ण युनिट पोखरा आइपुगेका छन् । कार्कीकै अवधारणा, परिकल्पनामा यो नाटकलाई मञ्चन गरिनेछ । सन्देशमुलक नाटकको लागि पोखरेली दर्शकको माया र साथ पाउनेमा […]
पोखरा, १३ असार । नेपाल युवा परिषद् गण्डकी प्रदेश शाखाले पहिलो पटक प्रदेश युवा सम्मेलन पोखरामा गर्न लागेको छ । विहिबार पोखरामा सो सम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल युवा परिषद्, गण्डकी प्रदेश संयोजक मोनिका रानाभाटले गण्डकी प्रदेश का ११ ओटै जिल्लाबाट युवाहरुलाई प्रदेश राजधानिमा ल्याई प्रदेश युवा सम्मेलन २०१९ को आयोजना हुने भएको वताईन […]
पोखरा महानगरपालिकामा तालाबन्दि गरिने
पोखरा, १३ असार । पोखरा महानगरपालिकाले बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको भन्दै बिहीबार गेटमा तालाबन्दि गरिने भएको छ । विभेदको बिरोधमा काँग्रेसतर्फका वडाध्यक्षले बुधबार दिनभर महानगर गेट बाहिर धर्ना र नाराबाजी गरेपनि मेयरले कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै तालाबन्दि गर्न लागिएको हो । तालाबन्दि रहन नभएर बाध्यता हो, यसबाट नगरबासिलाई पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्छौ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ – […]
पोखरा, १२ असार । ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पुरातात्विक महत्व बोकेको कास्कीस्थित झोवाङको शीतल गुफा पर्यटकको पर्खाइमा रहेको छ । कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ सल्यानस्थित प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना रहेको सो गुफालाई स्थानीय पहलमा व्यवस्थित गरेसँगै यतिखेर यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानीयवासी लागिपरेका छन् । पोखरा–बागलुङ सडकखण्डको झुवारी खोला पुलसँगै सुगम स्थानमा अवस्थित प्राचीन गुफामा आवश्यक भौतिक संरचनाको विकाससहित […]
पोखरा, १२ असार । लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार-पसार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस २०१९ को सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आज कास्कीमा पनि सम्पन्न भएको छ । लागूऔषध जस्तो डरलाग्दो कुलतबाट नेपाली दाजुभाई दिदि बहिनिहरुलाई टाढै राख्न साथै दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतना फैलाउन उक्त कार्यक्रम नेपालमा पनी विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउदै आईएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आज […]
हेमजा, १२ असार । पोखरा महानगरपालिका वडा न. २५ को वडा स्टरीय कृषि संजालको आयोजना एंव वडा कार्यलयको आर्थिक सहयोगमा एक कार्यक्रमका बिच हेमजामा रहेका किसानलाई कृषि सामाग्री बिहिबार बितरण गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि पोखरा महानगरपालिका वडा न. २५ का वडा अध्यक्ष सोभाखर तिमिल्सिनाले कृषकको हितमा पछि पनि वडा बाट सहयोग गर्ने बताउदै […]
पोखरा ११, बुधबार । पोखरा–१७ ड्यामसाइडमा अर्गानिक स्वाद पाइने गरि बुधबारबाट होटल लिबट्री सञ्चालनमा आएको छ। फलेवास नगरपालिका १ कार्कीनेटा जन्मिएका विनोद पौडेल र उनकी धर्मपत्नि मेनुका शर्माद्वारा सञ्चालित लिबट्रीमा १२ वटा एसी रुम, ९ वटा ननएसी सहित गरी २१ वटा रुम र १ वटा सेमिनार हल रहेको लिबट्रीमा प्रत्येक फ्ल्याटमा वेटिङ रुम रहेको छ। […]
पोखरा, ११ असार । पोखराको हल्लनचोक देखी सेदिसम्म एक भारतिय नम्बर प्लेटको गाडीले जथाभावि रुपमा मोटर साईकलहरुलाई ठक्कर दिई अकल्पनिय दुर्घटना गराएको छ । बुधबार दिउसो गाडी अनियन्त्रीत हुदा ५ वटा सवारी साधन सहित एक पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिई एक गम्भिर र तीन जना सामान्य घाइते भएका छन् । बुधबार दिउँसो करिब १ बजेको समयमा […]